ShweMinThar: ယာဂု သို့မဟုတျ ဆနျပွုတျ သို့မဟုတျ Porridge
ယာဂု သို့မဟုတျ ဆနျပွုတျ သို့မဟုတျ Porridge
ကြှနျတျောတို့ နံနကျစာအဖွဈ ဒါမှမဟုတျ နမေကောငျးတဲ့အခါ အစာကွညေကျဖို့ခကျခဲခြိနျ စားတတျကွတဲ့ ဆနျပွုတျနဲ့ ယာဂုက ဆငျသလိုလိုနဲ့ အနညျးငယျကှဲပွားပါတယျ။ တောငျငူမုနျ့ဟငျးခါးလိုပေါ့ အရညျကွဲ အရညျပဈြဆိုတာမြိုးလေ။
မြားသောအားဖွငျ့ တဈညတာ ဗိုကျထဲ အစာလုံးဝမရှိဘဲ နံနကျစာအဖွဈစတငျ စားသုံးတဲ့အခါ တရုတျလူမြိုးတှကေ ဆနျပွုတျနဲ့ အီကွာကှေးကို သမာရိုးကစြားသောကျလရှေိ့ခဲ့ကွတယျဆိုပဲ။
မွတျစှာဘုရားရှငျ တဈခုသောကာလ မြားစှာသော သံဃာတျောမြားနဲ့အတူ အန်ဓဝိန်ဒရှာကို ဒသေစာရီကွှခြီခြိနျမှာ ပုဏ်ဏားတဈယောကျက ယာဂုနှငျ့တကှ ပြားသကာအခြိုမုနျ့တို့ကို ကပျလှူပူဇျောခဲ့သတဲ့။ ဤသညျမှစပွီး ယာဂုလှူပှဲအစဉျအလာပျေါပေါကျလာတယျလို့ဆိုတယျ။ မွတျစှာဘုရားရှငျ လနောနှိပျစကျခွငျးခံရခြိနျ အရှငျအာနန်ဒာက မာတုဂါမတဈဦးထံ ယာဂုအလှူခံကပျလှူပေးပွီး ပွပြေောကျစတေဲ့ သာဓကလညျးရှိတယျ။ ခငျြးစိမျး၊ ငရုတျ၊ ကွကျသှနျ၊ နှမျးတို့ဖွငျ့ စီရငျထားတဲ့ ဆနျပွုတျပဈြပဈြ ယာဂုတဈမြိုးပေါ့။
မငျးတုနျးမငျးလကျထကျ ရှမွေို့တျောလေးပွငျလေးရပျ တရုတျ၊ ကုလား လူမြိုးခွားမှစပွီး တိုငျးသူပွညျသားအားလုံး လူတဈကိုယျ ဆနျ တဈစလယျကြ စုဆောငျး၍ ယာဂုကြိုလှူစရော၊ ထိုယာဂုမှာ ကောကျညှငျး၊ ဆနျ၊ဆီ၊ဆား၊နှမျး၊ခငျြးစိမျး၊မွပေဲ၊အုနျးသီး၊သဈကွားသီး စသညျတို့ကို ထညျ့၍ကြိုသညျဟုဆိုထားပါတယျ။ ၎င်းငျးယာဂုကြိုခွငျးကိုပငျ ယခုခတျေမှာ ထမနဲထိုးသညျဟုဆိုကွောငျး မှတျသားရ တယျခငျဗြ။
ဆနျပွုတျအလှနျကွိုကျသော မိသားစုမှ ဆငျးသကျလားပီး..အဖေ ပွုတျပေးခဲ့တဲ့ ဆနျပွုတျလေးတှကေ အလှနျကောငျးပါ့ရှငျ..။ ငယျတုနျးကတော့ ကောကျညှငျးထညျ့ ပွုတျလေ့ မရှိပါဘူး၊ ဆနျသဈပျေါခြိနျ ဆောငျးအေးအေးမှာသာ ပွုတျစားလရှေိ့တော့ စီးစီးအိအိလေး အမွဲဖွဈတယျ...။ လှနျခဲ့တဲ့ ၁၃ နှဈလောကျက ထိုငျးမှာ သူငယျခငျြးလေး ဝယျကြှေးတဲ့ ဆနျပွုတျကို စားမိတော့..ဘယျလိုကွောငျ့ စီးစီးအိအိလေး ဖွဈနပေါလိမျ့လို့ အတှေးကွှယျခဲ့ရာကနေ..ကောကျညှငျး၊ ရှမျးဆနျ၊ ဂပြနျဆနျ၊ ကိုရီးယားဆနျ၊ ဆူရှီဆနျ ( စီးတဲ့ဆနျ ဘာဆနျဘဲဖွဈဖွဈ ) ဆနျပွုတျပွုတျရာမှာ ထညျ့သုံးပါတယျ။
မီးအေးအေးနဲ့ အကွာကွီးပွုတျထားတဲ့ အရိုးပွုတျ အခြိုရညျက ဆနျပွုတျကောငျးဘို့အတှကျ အရေးပါ ပါတယျ..။ ကွကျရိုး..ဝကျရိုး ..မညျသညျ့အရိုးကိုမဆို အသုံးပွုနိုငျပါတယျ..။
ပါဝငျသော ပစ်စညျးမြား ( ၄ ပနျးကနျစာ)
1. ဆနျ ၁ ဆနျခြိနျခှကျ
2. ကောကျညှငျးဆနျ ၄ စားပှဲတငျဇှနျး
3. ဆား သငျ့ရုံ
4. ဘဲလညျပငျးရိုး ၂ ခြောငျး ( ကွကျရိုး၊ ဝကျနံရိုးလညျး သုံးနိုငျ)
5. ခငျြး ၁လက်မ
6. ကွကျသှနျမွိတျ ၂ ပငျ
7. ကွကျသှနျဖွူကွျော ၁ လကျဘကျရညျဇှနျး
8. ငရုတျကောငျးမှုနျ့ အနညျးငယျ
9. ပဲငံပွာရညျ အကွညျ လိုသလောကျ
1. ခငျြးတဈဝကျကို ပါးပါးလှီး၊ ကနျြတဈဝကျကို ပါးပါးအမွှငျလေးတှလှေီးထားပါ။
2. ကွကျသှနျဖွူကွျောကို လေးစိတျကှဲ ထောငျးပွီး ဆီပူပူလေးလောငျးထားပါ။
3. ဘဲလညျပငျးရိုး ၂ ခြောငျးကို ရစေငျအောငျဆေးပီး ဆနျပွုတျမညျ့ အိုးထဲထညျ့၊ ရေ ၁၀၀၀ မီလီမီတာ ထညျ့၊ ခငျြး ပါးပါးလေး ၄ ပွားလောကျထညျ့ပွီး အခြိုရညျထှကျအောငျမီးအေးအေးဖွငျ့ ပွုတျထားပါ။ ထှကျလာတဲ့ အမွှုတျတှေ၊ သှေးအစအန တှကေို ခပျထုတျပွီး ဖယျပွဈပါ။ (မမီးကတော့ ဇကာစိတျစိတျနဲ့ နောကျအိုးတခုထဲကို စဈပီးထညျ့တယျ)
4. အရိုးပွုတျရညျ ကွညျကွညျသနျ့သနျ့လေးဖွဈသှားမှ ဆနျ နဲ့ ကောကျညှငျးဆနျ ကို ရဖှေဖှလေးဆေးပွီး အရိုးပွုတျရညျထဲထညျ့ ပါ။ ပထမတော့ ပွုတျရညျ ဆူအောငျ မီး အလယျလတျမှာထားပွီး တညျပါ။ ဆူလာပီ ဆိုတာနဲ့ မီး ကိုလြှော့ပွီး မီးအေးအေးနဲ့ဆနျသားလေးတှေ မွသှေ့ားတဲ့ အထိ ပွုတျပါ။ (ခကျြပီးသားထမငျးကို ပွုတျရငျတော့ မွနျမွနျနူးမွပေ့ါတယျ) လိုအပျလြှငျ ရပေူဖွညျ့ပေးပါ။ ၁-၂ နာရီနီးပါး လောကျ ပွုတျရပါတယျ။
5. ဆား ထညျ့ ပွီး အရသာကောငျးပွီ ဆိုရငျ သုံးဆောငျမညျ့ပနျးကနျလုံးထဲထညျ့၊ ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ခငျြး၊ ကွကျသှနျမွိတျ၊ ကွကျသှနျဖွူကွျောဆီခကျြ၊ ငရုတျကောငျး တို့ထညျ့ ပွီး ပူပူနှေးနှေးသုံးဆောငျပါ။ အီကွာကှေး နဲ့ လိုကျဖကျပါတယျ။
ဂြုတျ (Thai Congee)
ဂြုတျ (Jok) လို့ချေါတဲ့ မနကျစာဆနျပွုတျတဈမြိုးဟာ ထိုငျးနိုငျငံတဈဝှမျး နံနကျစာအနနေဲ့လူစားမြားတဲ့ အစား အစာတဈမြိုးဖွဈပါတယျ။ ဆနျနဲ့ပွုတျလို့ရသလို သူတို့ ရိုးရာကတော့ ဆနျကိုမဖွုနျးတီးဘဲ Jasmine rice ရဲ့ ဆနျကှဲ ကိုသုံးပါတယျ။ ဆနျကှဲကိုခပျပြော့ပြော့ခကျြပွီး ကွကျပွုတျ ရညျ၊ ဝကျပွုတျရညျတို့နဲ့ ပွနျပွီးပွုတျထားတဲ့ ဆနျပွုတျမှာ ဝကျကွိတျသား၊ မှိုအမညျးစတာတှနေဲ့ ပွနျလညျပွငျဆငျ ထားတဲ့ နံနကျစာ ဖွဈပါတယျ။
- Jasmine rice - ၁ ခှကျ
- ရေ - ၁၀ ခှကျ
- ဝကျကွိတျသား - ၅၀ ဂရမျ
- ကွကျသှနျဖွူ (စဉျးပွီး) - ၄ တကျ
- ခငျြး(စဉျးပွီးသား ) - စားပှဲဇှနျး၂ ဇှနျး
- ပဲငံပွာရည - စားပှဲဇှနျး ၃ ဇှနျး
- ကွကျသှနျမွိတျ (ပါးပါးလှီးပွီး) - ၁ ပငျ
- နံနံပငျ (ပါးပါးလှီးပွီး) - ၂ ပငျ
- ခငျြး - ၁ တကျ
- ငရုတျကောငျးအဖွူမှုနျ့ - အနညျးငယျ
၁။ ဆနျရဆေေးပွီးရေ ၆ ခှကျထညျ့ပွီးရဆေူပွီးဆနျမြားပှလာသညျအထိတညျထားပါ။
၂။ ဆနျပှလာလြှငျမီးအလယျအလတျခနျ့လြော့ခပြွီး မီးပြော့ပြော့နှငျ့ တညျထားပါ။ ကနျြရမြေားထညျ့ပေးပွီးဆူအောငျတညျပေးထားပါ။ ရိုးရိုးဆနျကိုသုံးတဲ့အတှကျ ကွခေငျြရငျ ဒီနရောမှာ ကွကျဥမှတေံသုံးပွီး ခွေ ပေးပါ။
၃။ ဝကျသားလုံးရနျပစ်စညျးမြားရောပွီးစညျးနအေောငျနယျပါ အနတေျောအလုံးလေးမြား လုံးထားပါ။ (ပုံမှနျ လုပျနကေကြတော့ ဇှနျးကောကျလေးနဲ့ခပျခပျပွီး ဆနျပွုတျအိုးထဲထညျ့လိုကျတာပါ)ဆနျပွုတျအိုးရေ ဆူလာလြှငျ အသားလုံးလေးမြားပါ ထညျ့ပွီး ၅ မိနဈခနျ့ပွုတျပေးပါ။
၄။ အသားလုံးမြားကကျြပွီဆိုရငျတော့ ပနျးကနျမှာပွငျဆငျပွီးပါးပါးလှီးပွီးသားခငျြး၊ ကွကျသှနျမွိတျ၊ နံနံပငျ တို့နှငျ့ တှဲဖကျသုံးဆောငျနိုငျပါပွီ။
ဆနျ - တခှကျ (ဆနျခြိနျခှကျ)၊ရေ - ငါးခှကျ +ကွကျသှနျဖွူ - ၅မွောငျး၊ ငါးအသားလှာ (ငါးရံ့/ကကတဈ) - ၁၀၀ ဂရမျ၊ဂငျြး - ၃ပွား
ခရမျးခဉျြသီး/မုနျလာဥ - optional၊ငံပွာရညျ /ဆား၊ နှမျးဆီမှေး ၊ တရုတျနံနံ/ နံနံပငျ ၊ငရုတျကောငျး ၊ကွကျသှနျနီကွျော
"ဝ"ရိုးရာဆနျပွုတျဆိုရငျ နားထဲမှာ နညျးနညျးစိမျးနကွေမယျလို့ ထငျပါ တယျ။ "ဝ"လူမြိုးတှနေဲ့ အနနေီးစပျတဲ့ဒသေမြားမှာ နထေိုငျသူမြားကတော့ ရငျးနှီးပွီးသား ဖွဈမှာပါ။ ဒီဆနျပွုတျခကျြနညျးလေးကို မြှဝပေေးလာသူကတော့ ‘ဝ’ လူမြိုးစု အမြားအပွားနထေိုငျတဲ့ ပနျစမျးမှ ဆိုဖီယာရဲ့ ညီမလေးဖွဈပါတယျ။ ထူးခွားတဲ့ပါဝငျပစ်စညျးမြားနဲ့ အရသာ ပူစပျစပျရှိတဲ့ ‘ဝ’ ဆနျပွုတျလုပျနညျးလေး ပွနျလညျ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
- ကွကျသား - တဈစိတျ
- ဆနျ - ပေါငျးအိုးဆနျခြိနျခှကျ တဈခှကျ
- ခငျြး - လကျတဈဆဈ
- ကွကျသှနျဖွူ - ၅ မွှာ
- ရေ - ၂ လီတာခနျ့
- ဆား - ၁ ဇှနျး
- ဟငျးခတျမှုနျ့ - အနညျးငယျ
- ဘိနျးစေ့ - လကျနှဈဆုပျ
- ဟှားကြောကျမှုနျ့ - ၁ ဇှနျး
- ဂျေါရခါးညှနျ့ - ၁ စညျး
- စမုနျစပါးရှကျ - ၁ စညျး
- တှဲဖကျစားရနျ ငရုတျသီးထောငျး
၁။ ဦးစှာ ကွကျသားကို ရဆေေးသနျ့စငျပွီး ခငျြးနှငျ့ကွကျသှနျဖွူ ထုပွားထညျ့ကာ ရထေညျ့ပွီး တညျထားပါ။
၂။ ဆားနှငျ့ ဟငျးခတျမှုနျ့ထညျ့ပါ။ အပျေါတကျလာသော အမွှုပျမြား ခပျထုတျ ပေးပွီး ကွကျသားနူးပါက ဆယျယူထားပါ။
၃။ ကနျြကွကျသားပွုတျရညျထဲ ဆနျကို ရဆေေးပွီးထညျ့ကာ နူးအိသညျအထိ တညျပေးပါ။ လိုအပျပါက ရကေို အနညျးငယျစီ ထပျထညျ့ပေးပါ။
၄။ ဆနျပွုတျပွုတျထားစဉျ ဘိနျးစကေို့ ရဆေေးသနျ့စငျပွီး (ခဲမပါအောငျ ကငျြပေးပါ) ရစေဈကာ အနညျးငယျညကျရုံ ထောငျးထားပါ။
၅။ အအေးခံထားသော ကွကျသားကို အသားမြှငျထားပါ။
၆။ ဆနျပွုတျကွညေကျပွီး နူးအိပါက အသားမြှငျထားသညျကို ထညျ့ပါ။ ထောငျးထားသောဘိနျးစနှေ့ငျ့ ဟှားကြောကျမှုနျ့ထညျ့ပွီး သမအောငျမှေ ပေးပါ။
၇။ ဆူပှကျပါက အပဈြအကြဲနှငျ့ အရသာကို လိုသလိုပွုပွငျကာ ဂျေါရခါးညှနျ့ နှငျ့ စမုနျစပါးရှကျထညျ့ပွီး သမအောငျမှပေေးပါ။ အရှကျကကျြပါက ပနျးကနျထဲထညျ့ပွီး ငရုတျသီးထောငျးဖွငျ့ တှဲဖကျကာ ပူပူစပျစပျအရသာ ရှိတဲ့ "ဝ" ရိုးရာဆနျပွုတျကို တညျခငျးသုံးဆောငျနိုငျပါပွီ။
ဒီဆနျပွုတျမှာ အခွားဆနျပွုတျနဲ့မတူတာကတော့ အနံ့လေးပါ။ ဆနျပွုတျအနံ့လေးမှေးအောငျလို့ ကနုကမာ (scallop) အခွောကျလေးတှကေိုထညျ့ထားပါတယျ။ မရှိရငျတော့ ရိုးရိုးကွကျသားဆနျပွုတျပဲခကျြကွညျ့ပါ။
ကွကျရငျအုပျသား ၅၀ကပျြသား၊ ဆနျ ထမငျးစားဇှနျး ဆယျဇှနျး၊ ဆား လကျဖကျရညျဇှနျး နှဈဇှနျး သို့မဟုတျ သုံးဇှနျး (ဆနျပွုတျထဲကို ဆားဘဲဥ(အငံဘဲဥ)ထညျ့စားမညျဆိုလြှငျ ဆားကို လကျဖကျရညျဇှနျး နှဈဇှနျးပဲထညျ့ပါ။)၊ ကနုကမာခွောကျ (Dried Scallop) ထမငျးစားဇှနျး တဈဇှနျးမောကျမောကျ၊ သကွား သို့မဟုတျ အခြိုမှုနျ့ ထမငျးစားဇှနျးနှဈဇှနျး၊ အီကွာကှေး ၅ခြောငျး၊ ကွကျသှနျမွိတျ ၁၀ပငျ၊ ဆေးဘဲဥ ၅လုံး၊ ဆားဘဲဥ (အငံဘဲဥ) ၅လုံး။
(ထမငျးစားဇှနျး = 1 tablespoon = 15ml)
(လကျဖကျရညျဇှနျး = 1 teaspoon = 5ml)
အိုးကွီးကွီးတဈခုထဲတှငျ ရေ ၄လီတာထညျ့ပွီး ပှကျလာအောငျတညျထားပါ။ ကနုကမာခွောကျမြားကို ရစေိမျထားပွီး နုတျနုတျစဉျးထားပါ။ ကွကျသားကိုသနျ့စငျထားပါ။ ကွကျသှနျမွိတျကို ပါးပါးလှီးထားပါ။ဆေးဘဲဥနှငျ့ အငံဘဲဥ (ဆားဘဲဥ)ကို အတုံးသေးသေးလေးတှတေုံး ထားပါ။ ရနှေေးအိုးထဲပှကျလာလြှငျ ဆား၊သကွား၊ကနုကမာခွောကျ၊ဆနျနှငျ့ ကွကျသားတို့ကိုထညျ့၍ အဖုံးမအုပျဘဲတညျပါ။ ပှကျလာ လြှငျ မီးအေးအေးဖွငျ့တညျပါ။ နာရီဝကျလောကျတညျပွီးလြှငျ ကွကျသားမြားကို ပွနျဆညျပွီး ရဖွေငျ့ဆေး၍ အသားမြားကိုနှာပွီး အမြှငျလေးတှလေုပျထားပါ။ အရိုးမြားကို အိုးထဲပွနျထညျ့ပွီး မီးအေးအေးဖွငျ့ နှဈနာရီလောကျတညျပါ။ (ရနေညျးသှားလြှငျ ပွနျပွနျ ဖွညျ့ပါ။) ဆနျပွုတျကို အီကွာကှေး၊ ကွကျသှနျမွိတျ၊ ဆေးဘဲဥ၊ဆားဘဲဥ(အငံဘဲဥ)၊ ကွကျသားမြှငျတို့ကိုထညျ့၍ သုံးဆောငျနိုငျပါသညျ။ (အဝါရောငျမုနျလာဥဖတျနှငျ့ ဂျေါဖီထုပျခွောကျမြားကို နှဈသကျလြှငျလညျး ထညျ့၍ သုံးဆောငျနိုငျပါသညျ။)
အရိုးကိုဆေးတာက ကွေးအိုးဟငျးရညျမှာလုပျသလိုမြိုးဆေးမှသာ ဆနျွ့ပုတျကဖွူဖွူလေးတှရေမှာပါ။ အရိုးကို တခါတညျးထညျ့ပွုတျရငျ အရိုးကထှကျလာတဲ့ သှေးခှဲလေးတှနေဲ့ဆိုရငျ ဆနျပွုတျကမဖွူဘဲ နညျးနညျးညဈညဈကလေးဖွဈတတျပါတယျ။
ဝကျရိုး ၅၀ကပျြသား၊ ဆနျ ထမငျးစားဇှနျး ဆယျဇှနျး၊ ဆား ထမငျးစားဇှနျး တဈဇှနျး၊ သကွား သို့မဟုတျ အခြိုမှုနျ့ ထမငျးစားဇှနျး ၂ဇှနျး သို့မဟုတျ ၃ဇှနျး။
ဝကျရိုးကိုရဖွေငျ့သုံးခါဆေးပါ။ ပှကျပှကျဆူနသေော ရနှေေးအိုးထဲကို ဆေးထားသော ဝကျရိုးတှကေိုထညျ့ပါ။ အရိုးမြားထညျ့၍ ပှကျပွီး အမွှုပျလေးတှမြေားလာလြှငျ မီးဖိုပျေါမှခပြါ။ အရညျမြားကိုသှနျပဈပွီး ဝကျရိုးမြားကို ရအေေးဖွငျ့ သှေးခဲလေးမြားပွောငျသှား အောငျဆေးပါ။ (အိုးထဲမှာညဈပတျနလြှေငျလဲ အိုးကိုပွနျဆေးထားပါ။) ထို့နောကျဆေးထားသော အရိုးမြားကို အိုးထဲပွနျထညျ့ ရေ ၄လီတာထညျ့။ ဆား၊သကွားတို့ကိုထညျ့ပွီး တညျပါ။ ဆနျကို ရဆေေးပွီး ထညျ့၍ မီးအေးအေးဖွငျ့ အဖုံးဖှငျပွီးတညျပါ။ ဆနျပွုတျအိုး ထဲတှငျ ရနေညျးသှားလြှငျ ထပျထပျဖွညျ့ပွီး ၂နာရီလောကျတညျပွီးလြှငျ အလှနျစားကောငျးသော ဝကျရိုးဆနျပွုတျကိုရပါပွီ။
ခကျြပွုတျပွသူ - Ei San’s Homemade Inspiration
ယာဂု သို့မဟုတ် ဆန်ပြုတ် သို့မဟုတ် Porridge
ကျွန်တေ်ာတို့ နံနက်စာအဖြစ် ဒါမှမဟုတ် နေမကောင်းတဲ့အခါ အစာကြေညက်ဖို့ခက်ခဲချိန် စားတတ်ကြတဲ့ ဆန်ပြုတ်နဲ့ ယာဂုက ဆင်သလိုလိုနဲ့ အနည်းငယ်ကွဲပြားပါတယ်။ တောင်ငူမုန့်ဟင်းခါးလိုပေါ့ အရည်ကြဲ အရည်ပျစ်ဆိုတာမျိုးလေ။
များသောအားဖြင့် တစ်ညတာ ဗိုက်ထဲ အစာလုံးဝမရှိဘဲ နံနက်စာအဖြစ်စတင် စားသုံးတဲ့အခါ တရုတ်လူမျိုးတွေက ဆန်ပြုတ်နဲ့ အီကြာကွေးကို သမာရိုးကျစားသောက်လေ့ရှိခဲ့ကြတယ်ဆိုပဲ။
မြတ်စွာဘုရားရှင် တစ်ခုသောကာလ များစွာသော သံဃာတော်များနဲ့အတူ အန္ဓ၀ိန္ဒရွာကို ဒေသစာရီကြွချီချိန်မှာ ပုဏ္ဏားတစ်ယောက်က ယာဂုနှင့်တကွ ပျားသကာအချိုမုန့်တို့ကို ကပ်လှူပူဇော်ခဲ့သတဲ့။ ဤသည်မှစပြီး ယာဂုလှူပွဲအစဉ်အလာပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ဆိုတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင် လေနာနှိပ်စက်ခြင်းခံရချိန် အရှင်အာနန္ဒာက မာတုဂါမတစ်ဦးထံ ယာဂုအလှူခံကပ်လှူပေးပြီး ပြေပျောက်စေတဲ့ သာဓကလည်းရှိတယ်။ ချင်းစိမ်း၊ ငရုတ်၊ ကြက်သွန်၊ နှမ်းတို့ဖြင့် စီရင်ထားတဲ့ ဆန်ပြုတ်ပျစ်ပျစ် ယာဂုတစ်မျိုးပေါ့။
မင်းတုန်းမင်းလက်ထက် ရွှေမြို့တော်လေးပြင်လေးရပ် တရုတ်၊ ကုလား လူမျိုးခြားမှစပြီး တိုင်းသူပြည်သားအားလုံး လူတစ်ကိုယ် ဆန် တစ်စလယ်ကျ စုဆောင်း၍ ယာဂုကျိုလှူစေရာ၊ ထိုယာဂုမှာ ကောက်ညှင်း၊ ဆန်၊ဆီ၊ဆား၊နှမ်း၊ချင်းစိမ်း၊မြေပဲ၊အုန်းသီး၊သစ်ကြားသီး စသည်တို့ကို ထည့်၍ကျိုသည်ဟုဆိုထားပါတယ်။ ၄င်းယာဂုကျိုခြင်းကိုပင် ယခုခေတ်မှာ ထမနဲထိုးသည်ဟုဆိုကြောင်း မှတ်သားရ တယ်ခင်ဗျ။
ဆန်ပြုတ်အလွန်ကြိုက်သော မိသားစုမှ ဆင်းသက်လားပီး..အဖေ ပြုတ်ပေးခဲ့တဲ့ ဆန်ပြုတ်လေးတွေက အလွန်ကောင်းပါ့ရှင်..။ ငယ်တုန်းကတော့ ကောက်ညှင်းထည့် ပြုတ်လေ့ မရှိပါဘူး၊ ဆန်သစ်ပေါ်ချိန် ဆောင်းအေးအေးမှာသာ ပြုတ်စားလေ့ရှိတော့ စီးစီးအိအိလေး အမြဲဖြစ်တယ်...။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၃ နှစ်လောက်က ထိုင်းမှာ သူငယ်ချင်းလေး ၀ယ်ကျွေးတဲ့ ဆန်ပြုတ်ကို စားမိတော့..ဘယ်လိုကြောင့် စီးစီးအိအိလေး ဖြစ်နေပါလိမ့်လို့ အတွေးကြွယ်ခဲ့ရာကနေ..ကောက်ညှင်း၊ ရှမ်းဆန်၊ ဂျပန်ဆန်၊ ကိုရီးယားဆန်၊ ဆူရှီဆန် ( စီးတဲ့ဆန် ဘာဆန်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ) ဆန်ပြုတ်ပြုတ်ရာမှာ ထည့်သုံးပါတယ်။
မီးအေးအေးနဲ့ အကြာကြီးပြုတ်ထားတဲ့ အရိုးပြုတ် အချိုရည်က ဆန်ပြုတ်ကောင်းဘို့အတွက် အရေးပါ ပါတယ်..။ ကြက်ရိုး..၀က်ရိုး ..မည်သည့်အရိုးကိုမဆို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်..။
1. ဆန် ၁ ဆန်ချိန်ခွက်
2. ကောက်ညှင်းဆန် ၄ စားပွဲတင်ဇွန်း
3. ဆား သင့်ရုံ
4. ဘဲလည်ပင်းရိုး ၂ ချောင်း ( ကြက်ရိုး၊ ၀က်နံရိုးလည်း သုံးနိုင်)
5. ချင်း ၁လက္မ
6. ကြက်သွန်မြိတ် ၂ ပင်
7. ကြက်သွန်ဖြူကြော် ၁ လက်ဘက်ရည်ဇွန်း
8. ငရုတ်ကောင်းမှုန့် အနည်းငယ်
9. ပဲငံပြာရည် အကြည် လိုသလောက်
1. ချင်းတစ်ဝက်ကို ပါးပါးလှီး၊ ကျန်တစ်ဝက်ကို ပါးပါးအမြှင်လေးတွေလှီးထားပါ။
2. ကြက်သွန်ဖြူကြော်ကို လေးစိတ်ကွဲ ထောင်းပြီး ဆီပူပူလေးလောင်းထားပါ။
3. ဘဲလည်ပင်းရိုး ၂ ချောင်းကို ရေစင်အောင်ဆေးပီး ဆန်ပြုတ်မည့် အိုးထဲထည့်၊ ရေ ၁၀၀၀ မီလီမီတာ ထည့်၊ ချင်း ပါးပါးလေး ၄ ပြားလောက်ထည့်ပြီး အချိုရည်ထွက်အောင်မီးအေးအေးဖြင့် ပြုတ်ထားပါ။ ထွက်လာတဲ့ အမြှုတ်တွေ၊ သွေးအစအန တွေကို ခပ်ထုတ်ပြီး ဖယ်ပြစ်ပါ။ (မမီးကတော့ ဇကာစိတ်စိတ်နဲ့ နောက်အိုးတခုထဲကို စစ်ပီးထည့်တယ်)
4. အရိုးပြုတ်ရည် ကြည်ကြည်သန့်သန့်လေးဖြစ်သွားမှ ဆန် နဲ့ ကောက်ညှင်းဆန် ကို ရေဖွဖွလေးဆေးပြီး အရိုးပြုတ်ရည်ထဲထည့် ပါ။ ပထမတော့ ပြုတ်ရည် ဆူအောင် မီး အလယ်လတ်မှာထားပြီး တည်ပါ။ ဆူလာပီ ဆိုတာနဲ့ မီး ကိုလျှော့ပြီး မီးအေးအေးနဲ့ ဆန်သားလေးတွေ မြေ့သွားတဲ့ အထိ ပြုတ်ပါ။ (ချက်ပီးသားထမင်းကို ပြုတ်ရင်တော့ မြန်မြန်နူးမြေ့ပါတယ်) လိုအပ်လျှင် ရေပူဖြည့်ပေးပါ။ ၁-၂ နာရီနီးပါး လောက် ပြုတ်ရပါတယ်။
5. ဆား ထည့် ပြီး အရသာကောင်းပြီ ဆိုရင် သုံးဆောင်မည့်ပန်းကန်လုံးထဲထည့်၊ ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ချင်း၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊ ကြက်သွန်ဖြူကြော်ဆီချက်၊ ငရုတ်ကောင်း တို့ထည့် ပြီး ပူပူနွေးနွေးသုံးဆောင်ပါ။ အီကြာကွေး နဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။
ဂျုတ် (Thai Congee)
ဂျုတ် (Jok) လို့ခေါ်တဲ့ မနက်စာဆန်ပြုတ်တစ်မျိုးဟာ ထိုင်းနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း နံနက်စာအနေနဲ့လူစားများတဲ့ အစား အစာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဆန်နဲ့ပြုတ်လို့ရသလို သူတို့ ရိုးရာကတော့ ဆန်ကိုမဖြုန်းတီးဘဲ Jasmine rice ရဲ့ ဆန်ကွဲ ကိုသုံးပါတယ်။ ဆန်ကွဲကိုခပ်ပျော့ပျော့ချက်ပြီး ကြက်ပြုတ် ရည်၊ ဝက်ပြုတ်ရည်တို့နဲ့ ပြန်ပြီးပြုတ်ထားတဲ့ ဆန်ပြုတ်မှာ ဝက်ကြိတ်သား၊ မှိုအမည်းစတာတွေနဲ့ ပြန်လည်ပြင်ဆင် ထားတဲ့ နံနက်စာ ဖြစ်ပါတယ်။
- Jasmine rice - ၁ ခွက်
- ရေ - ၁၀ ခွက်
- ဝက်ကြိတ်သား - ၅၀ ဂရမ်
- ကြက်သွန်ဖြူ (စဉ်းပြီး) - ၄ တက်
- ချင်း(စဉ်းပြီးသား ) - စားပွဲဇွန်း၂ ဇွန်း
- ပဲငံပြာရည - စားပွဲဇွန်း ၃ ဇွန်း
- ကြက်သွန်မြိတ် (ပါးပါးလှီးပြီး) - ၁ ပင်
- နံနံပင် (ပါးပါးလှီးပြီး) - ၂ ပင်
- ချင်း - ၁ တက်
- ငရုတ်ကောင်းအဖြူမှုန့် - အနည်းငယ်
၁။ ဆန်ရေဆေးပြီးရေ ၆ ခွက်ထည့်ပြီးရေဆူပြီးဆန်များပွလာသည်အထိတည်ထားပါ။
၂။ ဆန်ပွလာလျှင်မီးအလယ်အလတ်ခန့်လျော့ချပြီး မီးပျော့ပျော့နှင့် တည်ထားပါ။ ကျန်ရေများထည့်ပေးပြီးဆူအောင်တည်ပေးထားပါ။ ရိုးရိုးဆန်ကိုသုံးတဲ့အတွက် ကြေချင်ရင် ဒီနေရာမှာ ကြက်ဥမွှေတံသုံးပြီး ခြေ ပေးပါ။
၃။ ဝက်သားလုံးရန်ပစ္စည်းများရောပြီးစည်းနေအောင်နယ်ပါ အနေတော်အလုံးလေးများ လုံးထားပါ။ (ပုံမှန် လုပ်နေကျကတော့ ဇွန်းကောက်လေးနဲ့ခပ်ခပ်ပြီး ဆန်ပြုတ်အိုးထဲထည့်လိုက်တာပါ)ဆန်ပြုတ်အိုးရေ ဆူလာလျှင် အသားလုံးလေးများပါ ထည့်ပြီး ၅ မိနစ်ခန့်ပြုတ်ပေးပါ။
၄။ အသားလုံးများကျက်ပြီဆိုရင်တော့ ပန်းကန်မှာပြင်ဆင်ပြီးပါးပါးလှီးပြီးသားချင်း၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊ နံနံပင် တို့နှင့် တွဲဖက်သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ဆန် - တခွက် (ဆန်ချိန်ခွက်)၊ရေ - ငါးခွက် +ကြက်သွန်ဖြူ - ၅မြောင်း၊ ငါးအသားလွှာ (ငါးရံ့/ကကတစ်) - ၁၀၀ ဂရမ်၊ဂျင်း - ၃ပြား
ခရမ်းချဉ်သီး/မုန်လာဥ - optional၊ငံပြာရည် /ဆား၊ နှမ်းဆီမွေး ၊ တရုတ်နံနံ/ နံနံပင် ၊ငရုတ်ကောင်း ၊ကြက်သွန်နီကြော်
"ဝ"ရိုးရာဆန်ပြုတ်ဆိုရင် နားထဲမှာ နည်းနည်းစိမ်းနေကြမယ်လို့ ထင်ပါ တယ်။ "ဝ"လူမျိုးတွေနဲ့ အနေနီးစပ်တဲ့ဒေသများမှာ နေထိုင်သူများကတော့ ရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ဒီဆန်ပြုတ်ချက်နည်းလေးကို မျှဝေပေးလာသူကတော့ ‘ဝ’ လူမျိုးစု အများအပြားနေထိုင်တဲ့ ပန်စမ်းမှ ဆိုဖီယာရဲ့ ညီမလေးဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများနဲ့ အရသာ ပူစပ်စပ်ရှိတဲ့ ‘ဝ’ ဆန်ပြုတ်လုပ်နည်းလေး ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
- ကြက်သား - တစ်စိတ်
- ဆန် - ပေါင်းအိုးဆန်ချိန်ခွက် တစ်ခွက်
- ချင်း - လက်တစ်ဆစ်
- ရေ - ၂ လီတာခန့်
- ဆား - ၁ ဇွန်း
- ဘိန်းစေ့ - လက်နှစ်ဆုပ်
- ဟွားကျောက်မှုန့် - ၁ ဇွန်း
- ဂေါ်ရခါးညွန့် - ၁ စည်း
- စမုန်စပါးရွက် - ၁ စည်း
- တွဲဖက်စားရန် ငရုတ်သီးထောင်း
၁။ ဦးစွာ ကြက်သားကို ရေဆေးသန့်စင်ပြီး ချင်းနှင့်ကြက်သွန်ဖြူ ထုပြားထည့်ကာ ရေထည့်ပြီး တည်ထားပါ။
၂။ ဆားနှင့် ဟင်းခတ်မှုန့်ထည့်ပါ။ အပေါ်တက်လာသော အမြှုပ်များ ခပ်ထုတ် ပေးပြီး ကြက်သားနူးပါက ဆယ်ယူထားပါ။
၃။ ကျန်ကြက်သားပြုတ်ရည်ထဲ ဆန်ကို ရေဆေးပြီးထည့်ကာ နူးအိသည်အထိ တည်ပေးပါ။ လိုအပ်ပါက ရေကို အနည်းငယ်စီ ထပ်ထည့်ပေးပါ။
၄။ ဆန်ပြုတ်ပြုတ်ထားစဉ် ဘိန်းစေ့ကို ရေဆေးသန့်စင်ပြီး (ခဲမပါအောင် ကျင်ပေးပါ) ရေစစ်ကာ အနည်းငယ်ညက်ရုံ ထောင်းထားပါ။
၅။ အအေးခံထားသော ကြက်သားကို အသားမျှင်ထားပါ။
၆။ ဆန်ပြုတ်ကြေညက်ပြီး နူးအိပါက အသားမျှင်ထားသည်ကို ထည့်ပါ။ ထောင်းထားသောဘိန်းစေ့နှင့် ဟွားကျောက်မှုန့်ထည့်ပြီး သမအောင်မွှေ ပေးပါ။
၇။ ဆူပွက်ပါက အပျစ်အကျဲနှင့် အရသာကို လိုသလိုပြုပြင်ကာ ဂေါ်ရခါးညွန့် နှင့် စမုန်စပါးရွက်ထည့်ပြီး သမအောင်မွှေပေးပါ။ အရွက်ကျက်ပါက ပန်းကန်ထဲထည့်ပြီး ငရုတ်သီးထောင်းဖြင့် တွဲဖက်ကာ ပူပူစပ်စပ်အရသာ ရှိတဲ့ "ဝ" ရိုးရာဆန်ပြုတ်ကို တည်ခင်းသုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ဒီဆန်ပြုတ်မှာ အခြားဆန်ပြုတ်နဲ့မတူတာကတော့ အနံ့လေးပါ။ ဆန်ပြုတ်အနံ့လေးမွှေးအောင်လို့ ကနုကမာ (scallop) အခြောက်လေးတွေကိုထည့်ထားပါတယ်။ မရှိရင်တော့ ရိုးရိုးကြက်သားဆန်ပြုတ်ပဲချက်ကြည့်ပါ။
ကြက်ရင်အုပ်သား ၅၀ကျပ်သား၊ ဆန် ထမင်းစားဇွန်း ဆယ်ဇွန်း၊ ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း နှစ်ဇွန်း သို့မဟုတ် သုံးဇွန်း (ဆန်ပြုတ်ထဲကို ဆားဘဲဥ(အငံဘဲဥ)ထည့်စားမည်ဆိုလျှင် ဆားကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်း နှစ်ဇွန်းပဲထည့်ပါ။)၊ ကနုကမာခြောက် (Dried Scallop) ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းမောက်မောက်၊ သကြား သို့မဟုတ် အချိုမှုန့် ထမင်းစားဇွန်းနှစ်ဇွန်း၊ အီကြာကွေး ၅ချောင်း၊ ကြက်သွန်မြိတ် ၁၀ပင်၊ ဆေးဘဲဥ ၅လုံး၊ ဆားဘဲဥ (အငံဘဲဥ) ၅လုံး။
အိုးကြီးကြီးတစ်ခုထဲတွင် ရေ ၄လီတာထည့်ပြီး ပွက်လာအောင်တည်ထားပါ။ ကနုကမာခြောက်များကို ရေစိမ်ထားပြီး နုတ်နုတ်စဉ်းထားပါ။ ကြက်သားကိုသန့်စင်ထားပါ။ ကြက်သွန်မြိတ်ကို ပါးပါးလှီးထားပါ။ဆေးဘဲဥနှင့် အငံဘဲဥ (ဆားဘဲဥ)ကို အတုံးသေးသေးလေးတွေတုံး ထားပါ။ ရေနွေးအိုးထဲပွက်လာလျှင် ဆား၊သကြား၊ကနုကမာခြောက်၊ဆန်နှင့် ကြက်သားတို့ကိုထည့်၍ အဖုံးမအုပ်ဘဲတည်ပါ။ ပွက်လာ လျှင် မီးအေးအေးဖြင့်တည်ပါ။ နာရီဝက်လောက်တည်ပြီးလျှင် ကြက်သားများကို ပြန်ဆည်ပြီး ရေဖြင့်ဆေး၍ အသားများကိုနွှာပြီး အမျှင်လေးတွေလုပ်ထားပါ။ အရိုးများကို အိုးထဲပြန်ထည့်ပြီး မီးအေးအေးဖြင့် နှစ်နာရီလောက်တည်ပါ။ (ရေနည်းသွားလျှင် ပြန်ပြန် ဖြည့်ပါ။) ဆန်ပြုတ်ကို အီကြာကွေး၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊ ဆေးဘဲဥ၊ဆားဘဲဥ(အငံဘဲဥ)၊ ကြက်သားမျှင်တို့ကိုထည့်၍ သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။ (အ၀ါရောင်မုန်လာဥဖတ်နှင့် ဂေါ်ဖီထုပ်ခြောက်များကို နှစ်သက်လျှင်လည်း ထည့်၍ သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။)
အရိုးကိုဆေးတာက ကြေးအိုးဟင်းရည်မှာလုပ်သလိုမျိုးဆေးမှသာ ဆန်ြ့ပုတ်ကဖြူဖြူလေးတွေရမှာပါ။ အရိုးကို တခါတည်းထည့်ပြုတ်ရင် အရိုးကထွက်လာတဲ့ သွေးခွဲလေးတွေနဲ့ဆိုရင် ဆန်ပြုတ်ကမဖြူဘဲ နည်းနည်းညစ်ညစ်ကလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်။
၀က်ရိုး ၅၀ကျပ်သား၊ ဆန် ထမင်းစားဇွန်း ဆယ်ဇွန်း၊ ဆား ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်း၊ သကြား သို့မဟုတ် အချိုမှုန့် ထမင်းစားဇွန်း ၂ဇွန်း သို့မဟုတ် ၃ဇွန်း။
၀က်ရိုးကိုရေဖြင့်သုံးခါဆေးပါ။ ပွက်ပွက်ဆူနေသော ရေနွေးအိုးထဲကို ဆေးထားသော ၀က်ရိုးတွေကိုထည့်ပါ။ အရိုးများထည့်၍ ပွက်ပြီး အမြှုပ်လေးတွေများလာလျှင် မီးဖိုပေါ်မှချပါ။ အရည်များကိုသွန်ပစ်ပြီး ၀က်ရိုးများကို ရေအေးဖြင့် သွေးခဲလေးများပြောင်သွား အောင်ဆေးပါ။ (အိုးထဲမှာညစ်ပတ်နေလျှင်လဲ အိုးကိုပြန်ဆေးထားပါ။) ထို့နောက်ဆေးထားသော အရိုးများကို အိုးထဲပြန်ထည့် ရေ ၄လီတာထည့်။ ဆား၊သကြားတို့ကိုထည့်ပြီး တည်ပါ။ ဆန်ကို ရေဆေးပြီး ထည့်၍ မီးအေးအေးဖြင့် အဖုံးဖွင်ပြီးတည်ပါ။ ဆန်ပြုတ်အိုး ထဲတွင် ရေနည်းသွားလျှင် ထပ်ထပ်ဖြည့်ပြီး ၂နာရီလောက်တည်ပြီးလျှင် အလွန်စားကောင်းသော ၀က်ရိုးဆန်ပြုတ်ကိုရပါပြီ။
ချက်ပြုတ်ပြသူ - Ei San’s Homemade Inspiration
ကြောငျးသား/သူ မြားအတှကျ Google သုံးနညျး လမျးညှနျ
ဝကျသားပေါငျး - ငါးရှဉျ့ခွောကျစပျ - ငါးခေါငျးဟငျးခြို
IT ကိုစိတျဝငျစားတယျ ဘာလုပျရမှနျးမသိသူမြား
R2P (Responsibility to Protect) ဆိုတာ !!!
သူငယျခငျြးကောငျး ဘယျလိုရှာမယျ ??
အညာမုနျ့လကျဆောငျး - ကျောဖီအေး - ကူလျဖီး - မနျကညျြး...
ငှကွေေးဖောငျးပှမှု (Inflation) အကွောငျး - အပိုငျး (၁)
CJ (Citizen Journalists)တှအေဖွဈ တို့တိုငျးပွညျကို...